China High Capacity Syrup Na-ejuputa igwe Nweta igwe na ndị na - eweta ya | Higee
Akwa ikike sirop na-ejuputa igwe igwe
A na-eji igwe a na-ejuputa ọgwụ a maka mmiri syrup na-ejuputa na nsị, mere na SUS304 igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ SUS316 mgbochi anaghị emebi nchara maka akụkụ na kọntaktị na ihe, nke a na-agbaso ụkpụrụ GMP.
Kwụ Tergwọ Okwu: TT, L / C
Akpaaka Ike Sirop Na-ejuputa Capping 2 na 1 Ngwaọrụ
Igwe a na-ejuputa mmiri mmiri na-ejikọ ihe na-ejuputa karama na ịbanye n'ime otu monoblock, a na-arụkwa usoro abụọ ahụ n'ụzọ zuru ezu na akpaghị aka. A na-eji ya na ndochi mmiri mmiri ma ọ bụ mado.
Enwere ike ịhazi igwe ahụ iji mezue tebụl feeder, ihe nzacha, ihe mkpuchi, mkpoko karama.
● Na Piston ndochi tiori, ejuputa ọsọ bụ ngwa na nkenke dị elu; ndochi larịị kemeghi.
Nke gara aga: Mmanụ a Fụ na-ejuputa igwe
Osote: Automatic ncha ntutu ndochi Machine Line